Home News Golaha Amanka Ee QM Oo Shaaca Ka Qaaday Inay Soomaaliya Ka Tageeri...
Golaha Amanka Ee QM Oo Shaaca Ka Qaaday Inay Soomaaliya Ka Tageeri Doonan Dagaalka Ka dhanka ah Al-shabaab
Xubnaha ka tirsan golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa ugu horayn cambaareeyay qaraxyadii waa waynaa ee 23’kii bishan ka dhacay caasimada muqdisho ayna ku dhinteen dad ku dhaw 40 ruux.
Xubnaha golaha amaanka ayaa muujiyay sida ay uga xun yihiin weeraradaas, aygoona dhanka kale tacsi u diray dowladda soomaaliya iyo dhamaan qoysaskii ay ka soo jeedeen dadkii ku wax yeeloobay qaraxyadaas, ayagoona sidoo kale u rajay yay inta dhaawaca ah in ay si dhaqsi leh ku bogsoodaan.
Xubnaha katirsan golaha amaanka ayaa ku amaanay qaabkii ay ciidamada xooga dowladda soomaaliya iyo ku nabad ilaalinta midowga afrika ay uga hortageen weeraradaas.
Golaha amaanka ugu baaqay dhamaan dadka soomaliyeed iyo beesha caalamka in ay kawada shaqeeyaan nabad gelyada iyo xasiloonida soomaaliya.
Golaha ayaa ugu danbayn hoosta ka xariiqay in ay diyaar u yihiin in dowladda soomaaliya ay ka caawiyaan ladagaalanka Al-Shabaab.